Fitsangatsanganana, fizahan-tany ary biraon'ny fifandraisana any Korea avaratra sy atsimo izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fitsangatsanganana, fizahan-tany ary biraon'ny fifandraisana any Korea avaratra sy atsimo izao
Associations News • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovao farany momba ny Korea Avaratra • Vaovao farany momba ny Korea Atsimo • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Septambra 12, 2018
Ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany, miaraka amin'ny fanatanjahantena dia toa fanandramana ankehitriny hitondra an'i Korea atsimo sy avaratra amin'ny marimaritra iraisana.
Ankehitriny ny lohan'ny Koreana Tavaratra sy atsimo amin'ny biraom-pifandraisana iray hosokafana dia hanana fivoriana indray mandeha isan-kerinandro, raha ny dinika eo amin'ny sehatry ny asa kosa dia matetika.
Seoul sy Pyongyang dia hanokatra ity biraom-pifandraisana iraisampirenena Koreana ity amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisan-davitra "amin'ny famantaranandro" amin'ny zoma, hoy ny nambaran'ny Minisiteran'ny Firaisankina Koreana Tatsimo (MOU) tamin'ny Alarobia.
Ireo Koreana roa dia kasaina hiasa amin'ny biraon'ny fifandraisana amin'ireo solontenan'ny mponina ao amin'ny Kaesong Industrial Complex (KIC) izay efa nakatona ankehitriny, mialoha ny fihaonana fahatelo ataon'ny filoha Koreana Tatsimo Moon Jae-in sy ny mpitarika Koreana Tavaratra Kim Jong Un amin'ny herinandro ambony ao Pyongyang.
Seoul dia hampiasa ny “fantsom-pifandraisan'ora amin'ny famantaranandro” miaraka amin'i Pyongyang ho an'ny fifandraisana sy ny fifampiraharahana hiresahana olana isan-karazany momba ny fifandraisana eo amin'ny samy Koreana, hoy ny minisiteran'ny fampiraisana tamin'ny fanambarana an-tsoratra.
Ny lohan'ny biraom-pifandraisana dia sady misolo tena ny fifampiresahana sy ny fifampiraharahana amin'ny Korea Avaratra, hoy ny MOU, ary nanampy ny fihaonana eo amin'ny Korea sy Korea dia mety hitranga amin'ny fotoana rehetra amin'ny tanjona "hamaha olana lehibe."
Ny talen'ny fanokafana dia ho tompon'andraikitra amin'ny fampitana hafatra avy amin'ny roa tonta mpitarika “raha ilaina”, na dia nametraka laharana mafana teo anelanelan'ny Moon sy Kim ny talata roa volana tamin'ny volana aprily teo alohan'ny fihaonana an-tampony fahatelo-Koreana.
Notendrena hitarika ny birao ny minisitra lefitry ny fampiraisana Koreana Tatsimo Chun Hae-sung, raha nampandrenesin'i Pyongyang kosa fa ny filoha lefitry ny Komitin'ny DPRK momba ny fanavaozana ny fandriam-pahalemana ny firenena (CPRC) dia ho lohany, ary tsy hizara antsipiriany bebe kokoa .
Baik Tae-hyun, mpitondra tenin'ny minisiteran'ny fanamafisana, dia nilaza fa ny roa tonta dia nanaiky ny hanendry tompon'andraikitra amin'ny toeran'ny minisitra lefitra ho talen'izy ireo, amin'ny fiheverana fa ny anjara asa dia mitaky ny fandefasana hafatra avy amin'i Moon sy Kim, izay nanambara voalohany ny fananganana ny biraon'ny fifandraisana. ao amin'ny Fanambarana Panmunjom.
Ny olana mifandraika amin'ny dinika sy ny hetsika eo amin'ny samy Koreana, ny fikarohana iraisana, ary ny fifanakalozana - ary koa ny "asa ilaina amin'ny fampandrosoana ny fifandraisana eo amin'ny samy Koreana" - dia horesahina ao amin'ny biraon'ny fifandraisana.